Moulid Hujale, Author at Ka hortagga Korona - Page 2 of 2
Soomaaliya: 21 qof ayuu cudurka Coronavirus ku dhacay dalka oo dhan
War saxaafadeedki ugu dambeeyay oo ay maanta soo saartay Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ayaa lagu sheegay in tirada dadka cudurka fayraska Corona uu ku dhacay ay gaartay 21 qof wadanka oo dhan. Hoos ka aqriso warbixinta oo warsaxaafadeedka oo dhameystiran. “Maanta oo ay taariikhdu tahay 10/04/2020, waxaan xaqiijinaynaa inay soo kordheen 9 xaaladood oo … →
Sheekh Shibli: Jamaacada masjidka waa la iska dhaafi karaa haddii xanuun laga baqayo
Inta badan dalalka caalamka aya aalaga soo saaray amarro lagu xirayo masaajidyada, si loo yareeyo faafitaanka cudurka dunida faraha ba’an ku haya ee coronavirus. Laakiin Soomaaliya ayaan wali laga xirin masaajidyada, inkastoo cudurkan uu gaaray goor hore. Maalmihii lasoo dhaafay waxaa soo baxayay warar sheegaya in dad badan oo Soomaali ah ay kasoo horjeedaan xiritaanka … →
Muqdisho: Qofki ugu horeeyay oo u dhintay cudurka Corona iyo bulshada dhexdeeda oo uu ku faafay
Wasaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulsahda ayaa macaluumaad cusub kasoo saartay xaalada cudurka Corona. Qodobadda hoos ku qoran waxaa laga soo guuriyay War-saxaafadeed ay wasaaradda soo saartay. 1: Waxay Wasaaraddu cadaynaysaa in uu bilowday faafitaanka cudurka ee bulshada dhexdeeda (community transmission) 2. Waxay wasaaraddu xaqiijisay maantay 4 xaaladood oo cusub oo la xariirta caabuqa COVID-19 taas … →
Sheekooyinka been abuurka ah ee coronavirus laga sameeyay
Iyadoo kiisaska caabuqa coronavirus ee dunida ay sii kordhayaan, waxaa jira sheekooyin been abuur ah oo laga faafinayo caabuqa. Kiisas yar oo fayraska ah ayaa ilaa iyo haatan laga soo sheegay Afrika, balse dowladaha dalaka Afrika qaarkood ayaa weli la daalaa dhacaya been abuur laysla dhex marayo oo caabuqa ku saabsan. 1. Maya, uma baahnid … →
Wiil 11-sano-jir-ah oo ku guuleystay abaalmarinta $1,000 ee Tartanka Wacyi-gelinta Cudurka Covid19
15 June 2020, Mogadishu- Waxaa maanta la shaaciyay dadkii ku guuleystay Tartankii labada billood socday oo loogu tala galay muuqaal-sameynta wacyi-gelinta cudurka Covid19. Abaalmarinta kowaad oo ahayd lacag $1,000 ah waxaa la guddoonsiiyay muuqaal ay soo saareen wiil arday da’yar ah iyo walaashiis oo ku nool magaalada Qardho ee Puntland. Cabdijabar Daahir iyo walaashiis Saynab Daahir … →